Ungayibala Kanjani Imephu Yakho Kuhambo Lwamakhasimende | Martech Zone
Ungaluhlela Kanjani Uhambo LweKhasimende Lakho
NgoLwesibili, Januwari 24, 2017 NgoMgqibelo, ngoFebhuwari 13, 2021 Douglas Karr
Intuthuko enkulu ekuhlaziyweni kokumaketha nasemibhalweni ukuvela kwe amabalazwe ohambo lwamakhasimende ukusiza ukubhala, ukukala, nokwenza ngcono ukusebenza kwakho kwezokukhangisa - ikakhulukazi online.
Yini imephu yohambo lwamakhasimende?
Imephu yohambo lwamakhasimende yindlela osibona ngayo ngamehlo engqondo isipiliyoni samakhasimende akho ngomkhiqizo wakho. Imephu yohambo lwamakhasimende ibhala amaphoyinti okuthinta amakhasimende akho ku-inthanethi naku-inthanethi futhi ibhala ukuthi ulinganisa kanjani ukusebenza ngakunye kwamaphoyinti okuthinta. Lokhu kwenza abathengisi baqonde kangcono ukuthi amakhasimende asebenzisana kanjani nawe ukuze ukwazi ukwandisa uhambo lwamakhasimende, ususe izikhala nezithiyo zomgwaqo, ukuze wandise ukwaneliseka kwamakhasimende, ukuzibandakanya, ukuguqulwa namathuba we-upsell.
Ngokungafani nemingcele yamakhasimende eqondile, uhambo lwamakhasimende lungakhombisa izindlela eziningi lapho amakhasimende enza izinqumo futhi asabela khona ekuhlanganyeleni komkhiqizo. Amamephu ohambo lwamakhasimende angasiza neqembu lakho lokumaketha ukuthi ligxile ekukhangiseni nasekuthuthukiseni okuqukethwe kwamakhasimende athile. Ngenkathi amakhasimende akho engahle abe nokushintshwa okungenamkhawulo nokujika, kunezindlela ngokuvamile ezifanayo ozothola ukuthi amakhasimende ahamba phansi (noma ukuthi unethemba lokuthi zihambe ziye phansi).
Ama-85% wabakhangisi abasezingeni eliphakeme bakholelwa ukuthi kubaluleke kakhulu ukudala uhambo lwamakhasimende oluhambisanayo, kepha ama-40% kuphela asebenzisa igama elithi uhambo lwamakhasimende. Kuphela ngama-29% ezinkampani zamabhizinisi ezilinganisela ngokwazo ngempumelelo ekwakheni uhambo lwamakhasimende.
Hlanganisa idatha ekhona yokuhlaziya kusuka kuwebhusayithi yakho analytics, inkundla yokumaketha, i-CRM, idatha yokuthengisa, neminye imithombo.
Hlanganisa idatha ye-anecdotal kusuka ekuqapheni kwezokuxhumana komphakathi nasempendulweni yamakhasimende kuya kunqwabelanisa imizwa nokubaluleka kwedatha yakho yokuhlaziya.
Hlanganisa amaphuzu wedatha ngezigaba ngaphakathi komugqa wesikhathi (umgogodla) ohlanganisa ukuhlangana okufana nemibuzo, ukuqhathanisa, nezinqumo. Faka phakathi imizamo yakho yokumaketha endaweni ngayinye.
Humusha imininingwane futhi uhlaziye isigaba ngasinye noma iphoyinti lokuthinta ukwenza uhambo lube lula, lusheshe, noma lube mnandi.
Abathengisi bakhiqize le infographic enhle, Amamephu Wohambo Lwamakhasimende: Ungawahola Kanjani Amakhasimende Akho, ukufanekisa inqubo yokubhala ohambweni lwamakhasimende akho, ukuchaza isigaba ngasinye, nokusebenzisa amamethrikhi afanele kulesi sigaba ngasinye.
Yazi Uhambo Lwamakhasimende ku-Salesforce
Tags: kuhlaziywa idatha yamakhasimendeamaphuzu wedatha yamakhasimendeUkuhamba kwamakhasimendeamabalazwe ohambo lwamakhasimendeimephu yamakhasimendeamaphuzu okuthinta amakhasimendeziqondiseiziqondisoindlelaokukhombisa idatha yamakhasimendesalesforcekuyini
Isifundo se-InMoment Siveza Izikhiye Ezingu-6 Ezingalindelekile Zokwenza Okuthandwa nguwe